Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 22 စက်တင်ဘာလ 2013 ။ အပေါ် Published 30 မေလ 2015 .
Voici le fameux vaisseau Spatial လုပ်ငန်း du capitaine Kirk က, Charge d'Une မစ်ရှင် d'တူးဖော်ရေး interstellaire က de cinq ပေးစေလိုပါတယ်။
FSX / P3D - NCC-1701 သင်္ဘော USS ENTERPRISE - ကြယ်...
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 01 ဇွန်လ 2012 ။ အပေါ် Published 30 မေလ 2015 .
Gros ဗူးက de repaints (livrées) le ဘိုးအင်း 737 တန်းတူdéfautက de လောင်း FSX (သြစတေးသဟဇာတ avec Prepar3D v4 +), en ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် comptez6livréesတန်းတူdéfaut et 180 repaints 19 Air ကိုအိန္ဒိယ et 155 venant က de dont ...
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 01 အောက်တိုဘာလ 2015 ။ အပေါ် Published 01 အောက်တိုဘာလ 2015 .
က de cinq မူကွဲကွဲပြား de l'Aero un စုစုပေါင်း installer ce ဗူးက de Grande အရည်အသွေးတပ်မှူး (500 / 520 / 540A (HC) / 680 စူပါ et Rockwell တပ်မှူး Shrike) ainsi Que deux Cargo (AC500 et Designs ...
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 31 ဇန်နဝါရီလ 2010 ။ အပေါ် Published 30 မေလ 2015 .
la ဗားရှင်းလောင်း FS2004 ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
Aero L-159 ALCA (Advance အလင်းတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်) est un ကိရိယာများအား ...
လေကြောင်းမန်ယူ FU24 950 စီးရီး FSX & P3D
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 19 စက်တင်ဘာလ 2007 ။ အပေါ် Published 30 မေလ 2015 .
သဟဇာတ 24 àဖလက်ချာ FU950 Model 954, FSX et Prepar3D v4 + (Test တန်းတူ Rikoooo) ။ un အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ add-on က de très bonne အရည်အသွေး။ un ကြီးမားသနားခြင်းကရုဏာအàသား auteur Dean Baunton le ပင်ပန်းလောင်း ...
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 07 သြဂုတ်လ 2019 ။ အပေါ် Published 07 သြဂုတ်လ 2019 .
un incroyable add-on de l'hélicoptère AgustaWestland AW139 ။ Cette စက် polyvalente (ကယ်ဆယ်ရေး sanitaire, secourisme စသည်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့armée, lutte incendie, က de Operations) est န်ထမ်းတန်းတူက de nombreux ...
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 21 သြဂုတ်လ 2019 ။ အပေါ် Published 21 သြဂုတ်လ 2019 .
AgustaWestland AW139 မော်ဒယ်များ "ရှာရန်ပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေး" (SAR) ဗားရှင်း 2.1 beta ကို။ ce Model est Une လိုက်လျောညီထွေလောင်း FSX/P3D AW139 ခရီးတန်းတူ Icaro Group မှ du ။ Une vraie merveille! သည် Le ...
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 22 အောက်တိုဘာလ 2013 ။ အပေါ် Published 30 မေလ 2015 .
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 01 မတ်လ 2010 ။ အပေါ် Published 30 မေလ 2015 .
ထိပ်တန်းအဲယားဘတ်စ် A300-600 aux couleurs de la compagnie ထိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ avec ယာဉ် en 3D et panel ကို fonctionnel ပေါင်း des ၏သားတို့သည်personnalisés et un Manuel en anglais ။ Add-on က de အရည်အသွေး qui ကုသိုလ်ယူ le ...
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 18 သြဂုတ်လ 2010 ။ အပေါ် Published 30 မေလ 2015 .
Magnifique မျိုးပွားက de Grande အရည်အသွေး des အဲယားဘတ်စ် A300 B1, B2 et B4 ။ 10 livrées inclus သူတော်ကောင်းတရားသည် Le ယာဉ် virtuel est, la ဗားရှင်း ZERO-G et des ၏သားတို့သည်réels dont ။
က Les ဗားရှင်း...
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 05 စက်တင်ဘာလ 2018 ။ အပေါ် Published 26 စက်တင်ဘာလ 2018 .
သူတော်ကောင်းတရားဗူး contenant Les အဲယားဘတ်စ် A310-200 / 300 / MRTT avec 34 livrées et des ၏သားတို့သည်réels Les moteurs GE et PW သွန်းလောင်း။ Model et VC ကိုခရီးတန်းတူသောမတ်စ်ရုသသည်။ Inclus FMC, GPWS, မြေပြင်ကိုင်တွယ်မှု, V-မြန်နှုန်း ...
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 26 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2010 ။ အပေါ် Published 30 မေလ 2015 .
ကဲဒါဆိုရင်တော့ un ထိပ်တန်းအဲယားဘတ်စ် A318 aux anciennes couleurs d'ပြင်သစ်လေကြောင်း qui n'a pas encore été peint, Une texture plutôtအစတုန်းက et qui permettra à votre စိတ်ကူးစိတ်သန်းက de Fair le ကျန်ကြွင်းသောက de သား histoire ....
အဲယားဘတ်စ် A319-100 RépubliqueFrançaise FSX & P3D
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 10 ခုနှစ်ဧပြီလ 2010 ။ အပေါ် Published 30 မေလ 2015 .
Très beau Model က de စီမံကိန်း Airbus un ယာဉ် virtuel (VC ကို) et des ၏သားတို့သည်personnalisésသက်သေပြ d'un réel A319 avec ။
le Airbus A319 républiqueFrançaise est l'ကိရိယာများအားက de သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး du နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်က de ...
အဲယားဘတ်စ် A320 မိသားစု, Mega Pack ကို FSX & P3D
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 28 နိုဝင်ဘာလ 2013 ။ အပေါ် Published 30 မေလ 2015 .
Voici le Mega အဲယားဘတ်စ် A320 မိသားစု avec 145 က de Haute အရည်အသွေး repaints ထုပ်ပိုး။ ce contient l'ensemble des အဲယားဘတ်စ် de la famille A320 soit quatre Model avec des ၏သားတို့သည်personnalisés tels Que CFM56 et ထုပ်ပိုး ...
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 30 နိုဝင်ဘာလ 2010 ။ အပေါ် Published 30 မေလ 2015 .
အဲယားဘတ်စ် A320-200 aux couleurs de la compagnie lowcost EasyJet, le ယာဉ် virtuel est celui de l'A231 တန်းတူdéfautက de FSX, donc 100% fonctionnel, néanmoins, été fait comm Les အပေါ်အသနားခံစာ ajouts quelques ...
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 28 သြဂုတ်လ 2012 ။ အပေါ် Published 30 မေလ 2015 .
ထိပ်တန်းအဲယားဘတ်စ် A320 aux couleurs de la compagnie ဆွစ်ဇာလန်, contient des ၏သားတို့သည်personnalisés, ယာဉ် virtuel တန်းတူdéfaut "Modify" l'A321 က de de FSX (l'A320 à identique) ။ le pilotage က de cet ကိရိယာများအားဝယ်ယူရေး ...
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 22 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019 ။ အပေါ် Published 23 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019 .
Très bel အဲယားဘတ်စ် A320-232 modéliséတန်းတူ Project မှအဲယားဘတ်စ်, Ce ဗူး comprend le Panel ကို 2D A32X က de Stefan Liebe, un SFCC (slats / ခတ်ကွန်ပျူတာ) pre-Configuration တန်းတူကဲန် Webber, ainsi Que inclut qui ...
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 11 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2015 ။ အပေါ် Published 23 နိုဝင်ဘာလ 2015 .
အဲယားဘတ်စ် A330-200 FSX & P3D
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 27 မေလ 2009 ။ အပေါ် Published 30 မေလ 2015 .
ce ထိပ်တန်း add-on ကိုအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ nous တန်းတူသောမတ်စ်ရုသက, l'အဲယားဘတ်စ် A330-200 est inclus avec les RR, GE et PW modèles offert ai ။ သွန်းလောင်း FSX et Prepar3D.
ce ဗူး inclut cinq livrées: ပြင်သစ်လေကြောင်း "အဟောင်း" et ...
Erik Bender အပေါ်အားဖြင့် Written 20 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2017 ။ အပေါ် Published 21 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2017 .
Pack ကိုလုံးဝအဲယားဘတ်စ် A330-243 aux couleurs de la compagnie ဟာဝယေံလေကြောင်းလိုင်း cet သွန်းလောင်း။ Inclus avec GPWS အဲယားဘတ်စ်, FMC, VC ကို et des ၏သားတို့သည်personnalisésသွန်းလောင်း။ လိုက်ဖက်တဲ့ FSX et P3D jusqu'a v4.3 et ...